DBF Ithuluzi Lokulungisa. DBF Ukubuyisela Isoftware. DBF Lungisa Ithuluzi.
DataNumen DBF Repair iyona best DBF ithuluzi lokutakula emhlabeni. Ingalungisa abonakele DBF amafayela wesizinda bese uthola idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela unciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
Kungani DataNumen DBF Repair?
Izici eziyinhloko ku DataNumen DBF Repair v2.9
Sekela zonke izinhlobo ze- DBF i-database, kufaka phakathi i-dBASE III, i-dBASE IV, i-dBASE 5 yama-dos, i-dBASE 5 ye-Windows, i-FoxBase, i-FoxPro, i-Visual FoxPro, njll.
Ukusekela ukulungisa DBF amafayela anememo noma izinkambu zedatha kanambambili ezigcinwe kumafayela e-DBT noma e-FPT.
Ukusekela ukuhlukanisa i- DBF file lapho usayizi wayo ufinyelela umkhawulo ochazwe ngaphambilini, ikakhulukazi, ukwesekwa kokuhlukanisa i-2GB enkulu DBF amafayela.
Ukusekela ukuhlukanisa itafula lapho inani lenkundla yalo lifinyelela inani lenkambu elichazwe ngaphambili.
Ukusekela ukulungisa DBF amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo le- DBF amafayela.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- DBF amafayela azolungiswa kukhompyutha yendawo.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa DBF ifayela elinemenyu yokuqukethwe ye-Windows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen DBF Repair Ukubuyisela Konakele DBF yolwazi
Lapho i-dBase yakho, i-FoxBase, i-FoxPro ne-Visual FoxPro yolwazi (.dbf amafayela) alimele noma akhohlakele futhi awukwazi ukuwavula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen DBF Repair ukuskena dbf amafayela bese uthola idatha kusuka kumafayela ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yikuphi okonakele noma okonakele dbf ifayela nge DataNumen DBF Repair, sicela uvale noma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha i dbf Ifayela.
Khetha okonakele noma okonakele dbf ifayela elizolungiswa:
Ungafaka i dbf igama lefayela ngqo noma chofoza ukuphequlula bese ukhetha ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho dbf ifayela elizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ebhokisini le-combo , ungakhetha futhi ifomethi yomthombo dbf ifayela. Okwamanje amafomethi alandelayo ayasekelwa:
Ngokuzenzakalelayo, ifomethi isethelwe ku- "Thola ngokuzenzakalela" ukuze DataNumen DBF Repair izobona ifomethi yomthombo dbf file bese ukhipha okulungisiwe ngokuya ngefomethi etholakele. Kodwa-ke, uma ngabe ifayili lokukhiphayo lingenakuvulwa ngempumelelo ngohlelo lwakho lokusebenza, lapho-ke ungacacisa ifomethi ezophoqelelwa DataNumen DBF Repair ukwenza ifomethi ngefomethi ehambisana nohlelo lwakho lokusebenza.
Ngephutha, DataNumen DBF Repair izogcina okungaguquki dbf database kufayela elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.dbf, lapho i-xxxx igama lomthombo dbf ifayela. Isibonelo, komthombo dbf ifayela Lonakele.dbf, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizolimala_fixed.dbf. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen DBF Repair intando start ukuskena nokulungisa umthombo dbf ifayela. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma ngabe umthombo dbf i-database ingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje usungavula i-fix dbf fayela ngezinhlelo ezihambisanayo.
DataNumen DBF Repair 2.4 ikhishwa ngoDisemba 23, 2020
DataNumen DBF Repair 2.2 ikhishwa ngoNovemba 6, 2020
DataNumen DBF Repair 2.1 ikhishwa ngoNovemba 10, 2019
DataNumen DBF Repair 2.0 ikhishwe ngo-Agasti 24, 2013
DataNumen DBF Repair 1.6 ikhishwa ngoMashi 24, 2008
Ukusekela ukuhlukanisa i- DBF ifayela lapho usayizi walo ufinyelela umkhawulo ochazwe ngaphambilini.
Sekela iWindows Vista.
DataNumen DBF Repair 1.5 ikhishwa ngoJulayi 12, 2006
Ngeza izilawuli eziningi ekutholeni kwefayela le-DBT / FPT.
Thuthukisa ukusebenza kahle kwenjini yokutakula.
DataNumen DBF Repair 1.4 ikhishwa ngoDisemba 5, 2005
Thuthukisa indlela yokubika yephutha.
Ukusekela ukuthola izinkambu kanambambili.
Buyisa inkohlakalo Oracle DBF amafayela wedatha.